mgm online casino mpanjifa maro
poker efi-trano eo akaikin'ny fort walton tora-pasika
poker efi-trano teo akaikin'ny grand junction co
poker efi-trano eo akaikin'ny gainesville fl
poker efi-trano eo akaikin'ny fort myers fl
Bahamas' ny Praiminisitra Perry Christie milaza ny tsy vita $3.5 b Eastern Mar resort casino dia hanomboka fanokafana ny vahoaka tamin'ny telovolana faharoan'ny taona 2017 mgm online casino bonus fehezan-dalàna pa. Ny zoma, Christie niresaka nandritra ny Bahamas trano fandraisam-bahiny Fikambanana hetsika, izay nambarany fa Eastern Mar ny tendrena ho mpividy, miorina ao Hong Kong fitambaran'ny Chow Tai Fook Orinasa (CTFE), dia manomboka "ny phased fanokafana" ny Eastern Mar tamin'ny volana aprily, miaraka amin'ny kely indrindra dia olona 700 ny fananana ny 1,800 efitra fandraisam-bahiny vonona ny handeha.
Perry CTFE no vola $200m ao amin'ny "mialoha ny fety fanokafana", ary farany ny fanitsiana ny tsy vita fananana, fanorenana izay voalaza fa ny 97% tanteraka alohan'ny zava-tany mba hampijanonana ny volana jona 2015 taorian'ny tany am-boalohany mpandraharaha Eastern Mar Ltd.nametraka fitarainana noho ny Toko faha-11 bankirompitra. Christie hoy CTFE nomanina mba manakarama ny 1.500 mpiasa "imminently" ny taona vaovao, raha 4,300 mpiasa ho amin'ny payroll amin'ny fotoana rehetra ny fananana ny amenities dia misokatra ho an'ny daholobe amin'ny alalan'ny desambra taona 2017 mgm online casino mpanjifa maro. Tamin'ny volana lasa, CTFE nanaiky ofisialy drafitry ny governemanta, milaza amin'ny antsipirihany ny drafitra miaina ny fiainana an-mipetra-potsiny Eastern Mar poker efi-trano eo akaikin'ny fort walton tora-pasika.
Ny drafitra voalaza fa nahitana ny nofantenana ny casino mpandraharaha ny orinasa mieritreritra ny fandraisana mpiasa avokoa ny fitantanana Eastern Mar ny lalao asa poker efi-trano teo akaikin'ny grand junction co. Tamin'ny alakamisy, ny Bahamian governemanta delegasiona nisidina ho any Hong Kong, hihaona amin'ny CTFE reps poker efi-trano eo akaikin'ny gainesville fl. Ny delegasiona, izay ahitana ny Fizahan-tany Minisitry ny Obie Wilchcombe, lehiben'ny Fampanoavana Allyson Maynard-Gibson sy mpikambana maro ao Bahamas Lalao Birao, ny drafitra ny fitetezam-paritra casino asa ao Makaô mba hahazo izay Wilchcombe antsoina hoe "fahatakarana ankapobeny ny fomba [CTFE] ny fiasan'ny modely." Bahamas Tribune voalaza Wilchcombe nilaza fa Eastern Mar no lafiny "lehibe iray tany casino ao Karaiba, noho izany dia tsy maintsy ho azo antoka ny zavatra izay atao [CTFE] te-hanao, izay lalao dia mikasa ny hametraka eo amin'ny rihana, izay ny fanamafisana dia ho, izay ny tsena ho an'ireo, na ambany sehatra, eny, ny fomba izy ireo dia dingana fampandrosoana." Wilchcombe resahina ao ihany koa ny filazana fa CTFE ny fampiasam-bola any amin'ny ray aman-dreny orinasa ny Makaô casino mpandraharaha SJM Holdings nanao ny orinasa 'unsuited' ny miasa ao Bahamas poker efi-trano eo akaikin'ny fort myers fl. Wilchcombe nilaza ny governemanta dia nanao noho ny fahazotoany amin'ny CTFE izay ahitana ny fanampiana ny "chairmen ny lalao isan-karazany zana-kazo eo amin'ny orinasa." Fa Wilchcombe nanolo-kevitra ny fiampangana azy ireo "be aza mikasika na inona na inona," nanamarika fa Masoandro Iraisam-pirenena mpanorina Sol Kerzner, izay miasa any Bahamas' Atlantis Paradisa Nosy resort, "tsy afaka mahazo fahazoan-dalana any ETAZONIA satria ny sasany sahoan-dresaka, saingy tsy nanakana azy tsy miara-mametraka ny orinasa lehibe, ary izany dia hita ho mendrika lehibe ho any Bahamas." Hahazo ny farany filokana vaovao avy any Calvin Ayre hard rock cafe casino tulsa.